Omenala South Korea | Akụkọ Njem
Omenala South Korea
Mariela Carril | | South Korea, omenala
Ruo oge ụfọdụ, eleghị anya afọ iri ugbu a, South Korea ọ dị na map ụwa nke ọdịbendị ndị a ma ama. N'ihi gịnị? Maka ụdị egwu ya, ama ama K-pop, na usoro ncha ha ma ọ bụ usoro telivishọn a na-akpọkarị doramas ndị Korea. Ha abụọ ewerewo ụwa ma nwee ndị na-eguzosi ike n'ihe n'ebe niile.
Dị nnọọ ogologo oge tupu egwuregwu ndị Japan na ihe nkiri na-eme ka anyị leba anya na Japan na ọdịnala ya, taa mba dị n'Eshia na-elekwasị anya bụ South Korea. Ọtụtụ ndị amalitela ịmụ Korea, soro ọrụ nke kpakpando ma ọ bụ rie usoro ahụ otu ọzọ ebe ha mepụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na televishọn Fordism iji kpọọ ahịa ahụ. Leekwa ihe ịga nke ọma ọ bụ! Ya mere, ka anyị lee ebe ụfọdụ n'ime Omenala South Korea:
N'akụkụ ndịda nke peninshula nke Korea, ha biri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Mmadụ nde 51 bụ ndị e kewapụrụ n'ebe ụmụnne ha nọ n'ebe ugwu kemgbe Agha Korea laa azụ na 50s. Na ochichi ha ka no na agha, agha kwusiri ike, mana eziokwu nke mba abuo abughi ihe ozo n'ihi na na ndida ha, ha bu oke osimiri ndi isi obodo ma na ugwu ha bu ndi ochichi. Otu n’ime mba ole na ole ndị fọdụrụ n’ụwa.
Ebumnuche ị ga-amata na ntọala nke ọha mmadụ ebe a bụ ezinụlọ, nke ahụ alụmdi na nwunye mere ndokwa dị nnọọ ọtụtụ ka, nke bu a macho ọha mmadụ na n'etiti umuaka nwoke na-enwe ike kari nwanyi. Ọzọkwa usoro agụmakwụkwọ dị ezigbo mkpa yana dịka na Japan, asụsụ Korea n'onwe ya na-egosipụta esemokwu mmekọrịta nke ọma.
Ọnọdụ ụmụ nwanyị, ọ bụ ezie na o toro kemgbe ọtụtụ afọ, anaghị eru ogo nha ọ bụla. Ọ bụ eziokwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara n’ime ha na-arụ ọrụ mana naanị 2% nọ n’ọkwá ọchịchị.
Na na kwuru, ka anyị lelee ụfọdụ n'ime Omenala Korea nke anyị kwesịrị ịma tupu ịga njem.
la nsọpụrụ O bu uzo omenaala si ekele ibe anyi.
Mgbe ị kọọrọ onwe gị, ihe mbụ ị ga-ekwu bụ aha ezinụlọ ahụ, ya bụ, aha nna. Ọzọkwa ọ bụ ihe a na-akpọkarị aha nna ha na ọ bụghị n’aha, ka ọ mere n’Ọdịda Anyanwụ afọ 60 gara aga. Ma oburu na inwee asambodo, onye oka iwu, dokita ma obu ihe obula, odikwara na itinye ya.
Ọ bụrụ na ị na-aga ikwe n’aka mgbe ị na-ekele ya, ya adịkwala nanị otu aka. Aka efu kwesịrị ịdakwasị nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, ị nwere ike ịgbapụ ma gbagọọ agbagọ Ọ bara uru dị ukwuu mgbe ị na-ekele gị dị ka mgbe ị na-asị goodbye.
dị ka ndị Japan, ndị Korea Ha kpọrọ asị nanị mba. Ọ na-esiri ha ike na ha na-aga otu puku ugboro na ọ bụ ya mere okwu ma ọ bụ mkparịta ụka ahụ nwere ike iji ogologo oge. Ha bụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị ndị mmadụ.
ndị Korea ha abụghị anụ ahụ ya mere mmadu kwesiri ikwusi ikwuputa otutu aru ya. Anyị na-amakụ, na-emetụ aka, na-emetụ aka nke ukwuu ma ha na-ewe iwe ma ọ bụ na-atụ ụjọ. Ọ dị oke mkpa inye ha ohere nke gị.
Ha agaghị arịọ mgbaghara ma ọ bụrụ na ị daba na ha n'okporo ámá ka ị ghara iwe iwe, ọ bụghị nke onwe, karịsịa na obodo ukwu.
ọ bụrụ na ị hụ ndị ikom na-aga na ogwe aka ma ọ bụ ụmụ agbọghọ ndị dị otú ahụ ọnụ, ọ bụghị na ha na nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere mmasị nwanyị, ọ bụ ihe nkịtị.
ndị Korea bụ ịgbanwe onyinye, ọbụna ego. Y’oburu n’inwe obi oma inweta otu cheta iji aka abuo iwere ya emeghekwala ya ruo mgbe onye nyere gi lara. Ọ bụ mkparị ime ya n'ihu ha.
Ọ bụrụ na ị ga-enye onyinye, ahọrọla akwụkwọ gbara ọchịchịrị ma ọ bụ nke na-acha ọbara ọbara, n’ihi na ha abụghị agba dị mma. Gaa maka agba agba. Kwesịrị iweta onyinye ọkachasị ma ọ bụrụ na akpọrọ gị n'ụlọ ma ọ bụrụ na anyị si n'akụkụ a nke ụwa anyị na-ebutekarị mmanya n'ebe ahụ sweets, chọkọletị ma ọ bụ okooko osisi. Ọ dịghị mmanya na-aba n'anya, ọ bụ ezie na ha na-a getụbiga mmanya ókè ọ na-enye anyị nsogbu. Ee ee, onyinye a agaghi adi oke n ’ihi na otu ozo ị gha amanye onyinye nke ya na ya kwesiri.
ị ga-emerịrị yipụ akpụkpọ ụkwụ gị mgbe ị na-abanye n'ụlọ nke onye Korea.
oge kachasị kachasị na-ekwe ka ọ bụrụ na a hụghị ya dị ka ihe ọjọọ bụ ọkara elekere. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na- n'oge mma.
ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọbịa mgbe ahụ ịkwesighi inyere onwe gị aka iri nri ma ọ bụ ị drinkụ ihe ọ drinkụ drinkụ. Onye na-ele gị anya ga-emere gị ya.
Nke a gbasara ndị na-elekọta mmadụ. Bụ njem nleta nkịtị ị nwere ike ị gaghị enwe ọnọdụ ndị maara nke ọma mana ọ bụrụ na ị gaa ịmụ akwụkwọ ma ọ bụ maka ọrụ ị ga-abanye n'ime ha. Kedu ihe ọzọ, ịchọrọ inweta ha n'ihi na otu ahụ ị ga-esi nweta eziokwu Korea.
Ọ bụrụgodi obere oge. Ma gịnị banyere Omenala Korea mgbe ọ bịara iri nri na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ drinkingụ? Nri bụ oge dị mkpa na ndụ Korea ma na-ewulite mmekọrịta mmekọrịta.
cheta nọdu l'ẹka onye kpọru nụ. Ọ bụrụ na onye ahụ siri ọnwụ na ị ga-anọdụ ala n’otu ebe, mee ya, ọ bụ ezie na ị nwere ike iguzogide ntakịrị nkwanye ùgwù n’ihi na ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-abụ oche kachasị mma.
ọ bụrụ na onye ahụ emeela agadi, ihe ziri ezi ọ ga-eme bụ ibu ụzọ jeere onwe ya ozi.
dị ka na Japan, ebula ụzọ jee ozi. Ihe dị mma ị ga-eme bụ ibu ụzọ jeere ndị ọzọ ozi. Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị, ọ na-abụkarị ụmụ nwanyị na-ejere ụmụ nwoke ozi mana ọ bụghị ibe ha (lee macho!)
Ọ bụrụ na ị chọghị ị drinkụkwu, hapụ naanị ihe ọ drinkụ drinkụ na iko ma ọ bụ ya. Na-efu ihe mgbe niile, mmadụ ga-eju ya.
Ọ bụ ihe nkịtị na obere nkeji ole na ole ha na-arara onwe ha nye na-eri nri, na-enweghị ikwu okwu. Ahụ erughị ala. Oge ụfọdụ mkparịta ụka na-amalite mgbe mmadụ niile richara obere nri.
A na-ebufe nri na ihe ọ drinkụ andụ na aka abụọ.
Ndị Korea ga-arapara n'ụlọ mmanya ozugbo nri gafere, yana dịka ezigbo ọbịa, ị kwesịrị ịjụ echiche ahụ.
Koreansfo mpempem pii de wɔn ani too fam ihe ọ drinkụ drinkụ mba ahụ kacha mma bụ soju, mmanya na-acha ọcha yiri vodka, ọ bụ ezie na ọ dị nro, n'etiti mmanya 18 na 25%.
Anyị amatala ihe anyị ga-eme na ihe anyị na-agaghị eme na nnọkọ oriri, mana kedu ihe a machibidoro iwu maka omenala ndị Korea? Ọfọn, ọ na-ekwu, sị:
ọ dịghị eyi akpụkpọ ụkwụ n’ụlọ ma ọ bụ n’ụlọ arụsị.
enweghị ihe ị ga-a drinkụ ma rie n’ebe ọhaneze na-agagharị.
E kweghị ka ị tinye ụkwụ gị n’elu oche, ọ bụrụgodi na ịnweghị akpụkpọ ụkwụ.
Ọ bụrụ na ị ga-ede ihe, ikwesighi iji ink uhie n'ihi na ọ bụ akara ọnwụ, yabụ na ị dee aha mmadụ n'elu, ha na-achọ ọnwụ n'onwe ya.
ọnụ ọgụgụ nke anọ bụ ọnụọgụ.
Ugbu a ee, jisie ike na njem gị na South Korea!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » omenala » Omenala South Korea
Omenala ndị Germany